John Mackewich - Mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony - Mpisolovava amin'ny orinasa marijuana manana fahazoan-dàlana
Mpisolovava - Ohio & Michigan
Mpisolovava rongony efa za-draharaha, mpandraharaha ary miasa.
Fanampiana marijuana ara-pitsaboana sy ara-pialam-boly ary mpanjifa hemp indostrialy nanomboka tamin'ny taona 2012. Nanampy tamim-pahombiazana ireo mpamboly, mpikirakira ary dispensera hahazo marijuana sy indostrialy hemp indostrialy manerana an'i Etazonia. Namolavola fangatahana fahazoan-dàlana hitrandraka rongony any amin'ny fanjakana maro.
Manampy ireo mpandraharaha rongony amerikana amin'ny fanitarana fanjakana marobe, fangaro sy fividianana trano, fahazoana trano sy famatsiam-bola ary koa ny lalàna mifehy ny fifanarahana sy ny asa.
Manampy ireo orinasa rongony kanadiana rehefa miditra any Etazonia izy ireo.
Fanoloran-tena ara-dalàna ho an'ireo orinasa vao manomboka sy ireo vao misondrotra;
Manampy ny mpanjifa anatiny sy iraisampirenena miaraka amin'ny merger sy fahazoana; fandaminana indray ny orinasa, fiaraha-miombon'antoka, fisoratana anarana ary famolavolana fifanarahana ara-barotra;
Famatsiam-bola ara-bola sy ara-barotra, ao anatin'izany ny fanoloran-tena amin'ny vola tsy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana; fifanakalozana ara-bola sy fananana manokana; famolavolana sy famolavolana fotodrafitrasa ara-bola sy trosa;
Ny fanarahan-dalàna momba ny fiarovana ny orinasam-panjakana, ao anatin'izany ny tatitra maharitra SEC, ny fitaovan'ny proxy, ny olana amin'ny fisoratana anarana, ny olana momba ny fanambarana ampahibemaso ary ny fitantanana orinasa.
Fahazoan-dàlana sy fanarahan-dalàna amin'ny indostrian'ny fanaraha-maso isan-karazany (banky, lalao, fanatanjahan-tena nofinofy, e-sports, rongony, hemp indostrialy);
Mpanolotsaina ankapobeny amerikana ho an'ny orinasa iraisam-pirenena;
Fanaraha-maso sy torohevitra momba ny fifanakalozana raharaham-barotra iraisam-pirenena, asa sy asa, fiaraha-miombon'antoka, varotra, fifindra-monina, fampiasam-bola avy any ivelany ary fifanakalozana ara-barotra miaraka amin'ny fanantitranterana an'i India sy Sina; SY
Manoro hevitra ireo orinasa iraisam-pirenena sy mpampiasa vola amin'ny resaka fampiasam-bola sy orinasa any Etazonia.
Fambolena sy fividianana
Fanarahan-dalàna amin'ny indostria mifehy
Fahazoan-dàlana sy lalàna momba ny marijuana sy indostrialy
Lalàna iraisam-pirenena sy varotra ho an'i Shina, India ary Azia
Fanarahan-dalàna amin'ny fanondranana entana any ivelany
Torohevitra eo an-toerana sy amin'ny ankapobeny
Asa sy asa, Human Resources, SHRM
Makà hevitra amin'ny rongony miaraka amin'i John
Fihenam-bidy amin'ny famatsiam-bola amin'ny ho avy